10 kw hibrida telo phase inverter
Toetra mampiavaka: ■ Fotoam-pifaneraserana an-tsofina <10ms Fandrindrana ny zotram-batana <3.3kw Mampifandray 100% entana tsy voalanjalanja amin'ny modely miendrika takelaka mijatra amin'ny herinaratra 200V-800v Adopt IP65, mety ho tontolo henjana toa ny haavo avo, ny hafanana, ny avo hatsiaka sy maharitra mandritra ny fotoana maharitra sy azo itokisana. Ny fiainana novolavolaina dia hatramin'ny 25 taona. ■ Manohana ny fampifangaroana vata ary tsy mihetsika eo amin'ny grid; Miaraka amin'ny fiasan'ny fitantanana angovo, tohizo ny oper autoniste tsy misy ...
Toetra mampiavaka: ■ Fotoam-pivoriana tsy tapaka / 10 <; Entam-bidy <1.2kw; Lanja maivana fanampiny <25kg ho fanatsorana tsotra; ■ ambaratonga fiarovana IP65, mety amin'ny tontolo henjana toa ny haavo avo, ny hafanana, ny hatsiaka ary ny fiasana maharitra sy maharitra. Ny fiainana novolavolaina dia hatramin'ny 25 taona. ■ Tohanana ny fanamoriana mifampitohy ary tsy azo averina; Miaraka amin'ny fiasan'ny fitantanana angovo, manohana ny fandidiana otrikarena tsy manam-petra tsy misy EMS. ■ Miaraka amin'ny flexib ...
On-Grid Inverter , système SOLAIRE , On Off Grid Hybrid Inverter , Off-Grid Inverter , Darfon H5001 Hybrid Inverter, Fortuner Hybrid Inverter ,